Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiainam-pirenena : Feno mpangataka i Madagasikara
Fiainam-pirenena : Feno mpangataka i Madagasikara
Tsy mitsaratra mitombo ny fahantrana eto Madagasikara. Tsy ny resaka kere intsony no andrefesana izany fa ny fahitana ny tranga eny amin’ny fiaraha-monina manerana ny nosy.
Ny fanadihadiana tany amin’ny faritra Antsiranana iny, izay nitohy tany amin’ny faritr’i Mahajanga, nandalo teto Antananarivo ka hatrany Fianarantsoa ary nipaka hatrany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany no nanaovana fanadihadiana.
Ny zava-misy eny amoron-dàlana no ahitana fa mitombo be dia be ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara. Mpangata izay tsy izy no hita manamorona ny làlam-pirenena rehetra. Hatramin’ny ankizy kely mbola telo taona ka hatramin’ny fitopolo taona mahery dia lasa mpangata avokoa. Mody manototra làlana eny amin’ny làlam-pirenena izy ireny, ka rehefa mandalo ny fiarakodia dia hatonin’izy ireo ka angatahany vola. Hazakazaka tsy misy toa izany no ataon’ireo kilonga mangataka amin’ireo olona mpandeha, mifendrofendro sy mampahonena.
Tsy izany ihany fa be dia be koa ny ankizy vavy kely mbola tsy ampy taona vavy mivaron-tena. Tsy misy henatra intsony fa manera lehilahy mihitsy. Tsy misy intsony izany fady sy ray aman-dreny izany fa toa efa ifanarahana koa aza.
Ny eto Antananarivo renivohitra dia tsy tenenina intsony fa mitombo be ny olona mivelona amin’ny fanariam-pako ankehitriny. Olona tsy ampoizina hitsindroka eny ampanariam-pako no hita ankehitriny.
Vokatr’izany rehetra izany dia potika tanteraka ny fiaraha-monina manerana an’i Madagasikara. Tsy miraharaha raha tsy ny hanina ho hanina eo noho eo ihany. Zava-poana ny foto-drafitrasa ataon’ny fanjakana ankehitriny ireo. Tsy miraharaha akory izany sekoly sy hopitaly ary kianja manaram-penitra izay imatetimatesan’ny fanjakana izao noho ny hanoanana mamely mafy.
Resin’ny fahantrana tanteraka ny vahoaka ankehitriny ka tokony hiova tetika sy tanjona ny fanjakana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Tsy mbola tara raha izao no manova sy mandray fanampahan-kevitra vaovao mba tsy hisian’ny tsy ampoizina aoriana ao.
Politika : Tsy matotra intsony ny fanjakana
Antananarivo dibo-drano : Tompon’andraikitra ireo fitondrana nifandimby
Inty sy Nday : Mitaky ny fahaizan’ny mpitondra ny zava-misy ankehitriny
Covid-19 : Nohidiana ny lapan’ny depiote ao Tsimbazaza
Malagasy : Telo taona nizakana ny tsy eran’ny aina
Ady amin’ny Covid : Nandainga ny préfet an’Antananarivo
Akom-baovao samihafa : Fikijan’ny orana Maro be ny traboina vokatr’izany
Inty sy Nday : Mitera-doza ny fanotorana tany